Semalt: SEO-अनुकूल मैत्री सामग्री कि Google पांडा तपाइँलाई माया गर्छु!
यदि तपाईंले हालसालै एउटा प्लेटफर्मलाई अप्टिमाइज गर्नुभयो र केहि प्रकाशित गर्न चाहानुहुन्छ भने, नोट गर्नुहोस् कि उच्च-गुणवत्ता र त्रुटि मुक्त सामग्रीले इन्टरनेटमा तपाईंको विश्वसनीयता बढाउन सक्छ। तपाइँ दुबै सोशल मिडिया र गुगलबाट धेरै धेरै ट्राफिक उत्पन्न गर्नुहुन्छ यदि तपाइँको सामग्री मार्क अप छ भने।
ज्याक मिलर, Semalt वरिष्ठ ग्राहक सफलता को प्रबन्धक, मा विश्वास गर्छ कि सामग्री गुणस्तर सबैभन्दा ध्यान केन्द्रित गर्न को लागी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो यदि तपाईं गुगल पांडा दण्डहरु र डिमोसनबाट बच्न चाहानुहुन्छ। किनकि २०१anda मा पांडा गुगलको साइट रेटिंग्स एल्गोरिथ्मको एक अंश हो।
प्रयोगकर्तामा फोकस गर्नुहोस्:
सामग्री र सामाजिक मिडिया मार्केटिंगको सवालमा प्रयोगकर्ताहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नु अनिवार्य छ। तल्लो रेखा यो हो कि मानिसहरूले कम-गुणवत्ताको सामग्री प्रकाशित गर्न र प्रमोट गर्न खोज्छन्, तर तपाईंले शीर्ष-खाच र अद्वितीय लेखहरू प्रकाशनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ। यस सम्बन्धमा, सबै वेबमास्टरहरू र ब्लगरहरूले वेब सामग्री आवश्यकताहरू कसरी पूर्ण गर्ने भन्ने बारेमा केही आधारभूत पक्षहरू बुझ्नुपर्दछ, किनकि सफलताको ढोका मात्र तिनीहरूमा खोल्न सक्दछ जब उनीहरू सामग्रीको गुणवत्तामा सम्झौता गर्दैनन्।
एसईओ मैत्री सामग्री लेखन आजको दिन एक आवश्यकता भएको छ, र तपाईंको वेब पृष्ठहरूको पाठ उचित कुञ्जी शब्द र वाक्यांश प्रयोग गरेर अनुकूलित गरिनु पर्छ।
हामीले कति पाठ लेख्नु पर्छ?
तपाईले पृष्ठहरूमा प्रासंगिक पदहरू खोज ईन्जिन नतीजाहरूमा राम्रो रैंकको लागि राख्नुपर्दछ। यो सुरक्षित छ कि त्यहाँ प्रति लेख पाठको अधिकतम रकम छैन, र यो बिषय बिषय फरक छ। मेरो भनाइको मतलब भनेको तपाईले लेख्नु भएको सामग्रीको प्रकार र तपाईले कभर गर्नुहुने शीर्षकले कति शब्दहरू लिनु पर्छ भनेर निर्धारण गर्दछ। केहि शीर्षकहरू -4००--4०० शब्दहरूमा कभर गर्न सकिन्छ, जबकि अन्यले तपाईंलाई २०००-3-000००० शब्दहरू लेख्नु पर्छ। SERP ले निश्चित गर्दछ कि खोज ईन्जिन परिणाममा राम्रो रैंकको लागि कति पाठ आवश्यक छ। मुख्य सामग्री (MC) पाठको मात्रामा ध्यान केन्द्रित गर्नुको सट्टा, तपाईंको ध्यान सामग्री र गुणहरूको लेखमा हुनुपर्दछ जुन तपाईंको दर्शकहरूले सबैभन्दा मनपर्दछ। कति शब्दहरू लेख्नु पर्ने कुनै नियम छैन। केहि पृष्ठहरू words० शब्दको साथ पनि उत्तम श्रेणी प्राप्त गर्दछन्, जबकि अन्यले 5000००० शब्दहरू सहित Google लाई प्रभावित गर्नुपर्दछ।
गुगलका जोन म्यूलर भन्छन् कि त्यहाँ न्यूनतम शब्द गणना छैन र सामग्री लेखकहरूको ध्यान क्वान्टमा नभई क्वालिटीमा हुनुपर्दछ।
हामी कति शब्दहरू अनुकूलन गर्न सक्छौं?
यो केहि चीजहरूमा पनि निर्भर गर्दछ, उदाहरणका लागि, तपाईंले आफ्नो पृष्ठको मुख्य सर्तहरूमा ध्यान दिनुहोस्। निश्चित गर्नुहोस् कि त्यहाँ कुनै प्रतिलिपि र टाँस्ने छैन, र सामग्री Google मापदण्डहरूमा निर्भर छ। यस्तो अवस्थामा तपाईको सामग्री अप्टिमेट गर्न सजिलो हुनेछ।
कीवर्ड स्टफिंग बेवास्ता गर्नुहोस्:
कीवर्ड स्टफिंग गुगल र अन्य खोज इञ्जिन दिशानिर्देशहरूको बिरूद्ध हो! यति धेरै कुञ्जी शब्द र वाक्यांशहरू भरिपूर्ण गर्नुको सट्टा, तपाईंले एकदम ध्यानाकर्षण गर्नुपर्दछ सही र गुणस्तर सामग्री प्रदान गर्न। कीवर्ड स्टफिंग भनेको तपाईको सामग्रीमा समान कुञ्जी शब्द वा वाक्यांश दोहोर्याउने प्रक्रिया हो। यो कालो टोपी एसईओ टेकनीकको रूपमा मानिन्छ र गुगलका नियम र कानूनको बिरूद्ध हो।
पहिलो "उपयोगकर्ता अनुभव" संकेत तपाईले परिचालित गर्नुपर्दछ उच्च गुणवत्ताको सामग्री र कुञ्जी शब्दहरूको न्यूनतम प्रयोग। तपाईंले आफ्नो सामग्रीलाई तपाईंको साइटको कोनाकामा सम्बन्धित गर्नुपर्दछ, यो निश्चित गर्दै कि गुणलाई कुनै पनि हालतमा सम्झौता गरिएको छैन किनकि यसले गुगल परिणामहरूमा बाँच्न मद्दत गर्दछ।